Iinkxaso-mali zeeNkampani zeeNdawo eziThengiswayo ziBonelela njani ngeeNkonzo zobuNjineli boNcedo-iBhlog yeNdawo ethengiswayo:
Kukufumana njani ukuXhamla iiNkampani zeearhente zeeArhente zeeNkonzo zoBunjineli
EyoMsintsi 09, 2019 by UDmitri Kara, Iimbono zizonke:
Amakhaya Akhiwe Kumhlaba Wakho
Ishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba linokhuphiswano olukhulu, kwaye izakhiwo ezibonelela ngexabiso elongeziweyo zizezona zibukeka kakhulu kubaqashi. Ukubonakala kwepropathi kubalulekile, kodwa ukusebenza kweenkqubo zokwakha nako kubalulekile. Abaqeshi abaninzi banika eyona nto iphambili kumgangatho njengokukhanya komgangatho, ubushushu bangaphakathi, amandla ombane, kunye nokukhusela umlilo ngokuthembekileyo. Ifemu yobunjineli inokunceda abaphuhlisi baphucule ezi zinto.
Ifemu yobunjineli efanelekileyo inokunceda ngokuthobela ikhowudi yokwakha, eyimfuneko esemthethweni yokwakha kunye nokuhlala.
Ezi khowudi zitshintsha kwilizwe nakwisixeko, kwaye iimfuno zazo zinokuba nzima kakhulu.
Ukubaluleka kokuThotyelwa kweKhowudi kwiiProjekthi zoKwakha Ngokufanelekileyo, iprojekthi yokwakha kufuneka ihlangane neekhowudi zolwakhiwo ngeenguqu ezincinci. Ukuthintela uhlengahlengiso ngexesha loyilo nolwakhiwo kokona kulungele umdla wabaphuhlisi kuba olu tshintsho luchitha ixesha kunye nemali eyinkunzi.
Iinguqu ngexesha lesigaba sokuyila aziphazamisi kangako kuba zichaphazela kuphela izicwangciso zokwakha kunye nokubalula. Nangona kunjalo, ukuba utshintsho oluninzi loyilo luyafuneka ukuhlangabezana neekhowudi, banokulibazisa imisebenzi yokwakha.
Ii-odolo zokutshintsha ngexesha lokwakha ziphazamisa ngakumbi kuba zizisa iindleko eziphezulu. Kuba umsebenzi okhoyo kufuneka uphindwe, iindleko zeprojekthi ziyenyuka. Xa isakhiwo sidlula isabelo-mali saso sokwakha, kudla ngokuba ngenxa yeenguqu ezigqithileyo.
Iinjineli ezinamava zinokuyila izakhiwo ngokwe khowudi kumzamo wokuqala, okanye ngokulungiswa okuncinci. Ukuba inkampani efanayo yobunjineli iqashwe ukuba ijongane, banokuqinisekisa ukuba umsebenzi ogqityiweyo uyamlinganisa uyilo oluvunyiweyo. Oku kugcina ixesha kunye nemali enkulu ngelixa uqinisekisa ukuba iprojekthi yokwakha iyahlangabezana nomda wayo.
AbaQeqeshi bangabaNceda njani abaThengi bagcine i-eneji naManzi
Ngoku ka UMichael Tobias, uIindleko zokuhlawulwa kwemali ziphakathi kweendleko ezinkulu zabaqeshi, kwaye ithemba lokuhlawula ngaphantsi kwamandla kunye nomtsalane linomtsalane. Xa iinkampani zepropathi zityala imali ekusebenzeni kwamandla kunye nolondolozo lwamanzi, ezi mpawu zingasetyenziselwa ukuthengisa.
UMichael Tobias ngumsunguli kunye nenqununu ye Iinjineli zaseChicago, INkampani engama-5000 ekhawulezayo yokuKhula eMelika. Ukhokela iqela le-30+ yoomatshini, zombane, imibhobho, kunye neenjineli zokhuselo lomlilo ezivela kwikomkhulu lenkampani kwiSixeko saseNew York; kwaye ikhokelele ngaphezulu kweeprojekthi ezili-1,000 XNUMX eChicago, eNew York, eNew Jersey, ePennsylvania, eConnecticut, eFlorida, eMaryland naseCalifornia, eSingapore naseMalaysia.
Kwizakhiwo ezininzi zokuhlala nezorhwebo, ukufudumeza kunye nokupholisa iakhawunti kwesona sabelo sikhulu seendleko zamandla, izabelo zikaMichael Tobias. Esona sikhulu iindleko ezimbini zitshintsha ngokuxhomekeka kwimozulu yendawo, kodwa ixabiso labo liphela lazo zonke ezinye iindleko zamandla. Amanyathelo okusebenza kwamandla okuphucula ukufudumeza kwendawo kunye neenkqubo zokuhambisa umoya zinokufumana ukonga oluphezulu.
Iinkqubo zokukhanyisa nazo zinokusetyenziswa okuphezulu, ngakumbi xa zisetyenziswa iiyure ezininzi ngenyanga. Umzekelo, izibane zeofisi kunye nezibane zangaphandle zikholisa ukuba neendleko eziphezulu zokusebenza. Ukukhanya okuqhelekileyo kwendawo kumagumbi kunye neecondiniums nako kunokusebenzisa amandla amakhulu.
Izibane ze-LED zilunge ngakumbi kuneenkqubo zokukhanya okuqhelekileyo ngelixa unenkonzo ende.
Ukuhlaziywa kwe-LED akugcini nje ngokugcina amandla kodwa kunye nokutshintsha kwesibane.
Ukulondolozwa kwamanzi, umlinganiselo osebenzayo usebenzisa ukulungiswa kokuhamba kwamanzi okuphantsi. Kwimeko yezakhiwo ezikhoyo, inkqubo yokuphompa kufuneka ihlolwe ukulungisa naluphi na ukuvuza. Ukulungiswa kwezinto ezindala zokugcina kunye namanzi amdaka, ngakumbi ukuba amatywina abo atyhafile.
Ukunikezela ngoKhuseleko loMlilo oluThembekileyo lwabaLimi
Ukuba uthelekisa iikhowudi zokwakha zasekuhlaleni, iimfuno ze iinkqubo zokukhusela umlilo iya kuba yeyona nto ifunwa kakhulu. Ezinye iinkqubo zokwakha ezinje ngokukhanyisa kunye ne-ventilation zibangela ukuphazamiseka kunye nokungasebenzi kakuhle xa zingasebenzi kakuhle. Nangona kunjalo, iinkqubo zokukhusela umlilo azinawo umda wempazamo, kwaye iziphumo zinokuba nzima xa zingaphenduli.
Izinto zokutshiza ezizenzekelayo ziphakathi kweendlela ezifanelekileyo zokukhusela umlilo kuba zinokucima amadangatye xa usemncinci. Iimuvi zisasaze umbono ongalunganga wokuba abacoci bahlamba sonke isakhiwo ngesibonakaliso esincinci somlilo okanye umsi, kodwa oku akunjalo. Kwizicelo zobomi bokwenyani, kuphela iifafaza ngokuthe ngqo ngaphezulu kokucima umlilo, kuba baphendula ubushushu.
Iinkqubo zokhuselo lomlilo eziyilelwe kakuhle ziyaxhamla iinkampani zepropathi yokuthenga izindlu nokuba isakhiwo asikaze sibe nesigameko sokucima umlilo. Iinkampani zeinshurensi zihlala zibonelela ngezicwangciso ezingcono kwaye zinciphisa iipremiyamu zezakhiwo ezikhuselekileyo zokhusela umlilo. Imali egcinwe kwi-inshurensi eqokelelwe ixesha elingaphezulu kwexesha ingabaluleka.
UDmitri Kara Septemba 9, 2019
Olu ngeno yafakwa kwi Ishishini lokuthengisa izindlu. Bookmark le Permalink.
Aprili 21, 2019 Imithombo yeenkcukacha ezixhaswayo (ababoneleli ngezezindlu) Ukuba ufuna ukwenza idatha yokutya ukuze isebenzise inkonzo yethu yolungelelwaniso unokucela enye yezi nkampani zilandelayo ukuba ikwenzele yona: feeds ze-XML2U zamkelwe zizibuko ezingaphezulu, iiclass, verticals, media yeendaba, ii-software kunye namanye amaqonga entengiso lomhlaba ngaphezu kwako konke okunye ukondla. Ukufumana ixesha lokongeza uluhlu lwakho kumaqonga entengiso amaninzi, ibe yingxaki yokwenyani. Isisombululo kukutya kwedatha evela kwiXML2U. Ukutya okukodwa kuko konke okufunekayo. Jonga nje ezinye ze […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Ngamana 31, 2018 Uyifumana njani indlela yokuhamba ngetrafikhi kunye nokukhokelela kwishishini lokuthengiswa kwezindlu kwi-Intanethi Kule mihla, abantu bayakuthanda ukusebenzisa i-intanethi ngelixa bekhangela ipropathi yendlu kwi-intanethi. Ngapha koko, iipesenti ezingama-53 zabathengi ziqala ukukhangela kwabo kwi-intanethi ngesiseko soluhlu lukaGoogle. Okungakumbi ungabambelela phezulu, iindwendwe ezininzi oza kuzifumana kunye nabanini bamashishini abathengisa izindlu nomhlaba ngoku baqala ngokugcina imali yabo ukuze babeke kwiinjini eziphambili zokukhangela njengeGoogle, Yahoo kunye neBing. Ke, eli ngoku lithuba lakho lokubambisa iintlanzi kwaye wenze inzuzo kuzo. I-SEO yinto ebalulekileyo yokuba abaxhasi bezindlu bafumane […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Ngamana 10, 2018 Amathuba amahle okutyala imali kwiSithili sokuqala Isithili sokuqala okwangoku yenye yeendawo ezinomtsalane kutyalo mali ezifumanise ukuba ziqwalaselwe ngabatyali zimali kuyo yonke iMelika, iAfrika, iAsia neYurophu. Masidlale ngamathuba amahle otyalo-mali kwisithili sokuqala. Ulwakhiwo phakathi kophuhliso olukhawulezayo eDubai ziziseko ezingamakhokelela kulwakhiwo lwezakhiwo ezitsha kwaye ubona izinto ezintsha njengoko suku ngalunye zidlula. Ibilithuba elininzi lokutyala iinjineli, […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Ishishini lokuthengisa izindlu
Septemba 13, 2018 UKUVUNYELWA EYONA INDAWO YOKUGQIBELA YOKUQALA Ikhredithi yemifanekiso: Intagent.com Ukuba ungoluphi na uhlobo lweshishini, kuyinto eqhelekileyo ukwazi ukuba uza kuba newebhusayithi ukuba abathengi bakho baya kuzo ukuze bakwazi ukukhangela babone ukuba loluphi uhlobo lweenkonzo ozihambisayo okanye eyakho uphawu ngu. Ukuba awunayo iwebhusayithi yenkampani woyisa injongo yakho yokwandisa umgca osezantsi. Kwaye ukrokrela ishishini lakho ngokungafumani igama lakho phaya kubathengi abanokubakho kunye nabantu ekujongwa kubo […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
January 18, 2019 Khetha eyona CRM yokuthengisa izindlu kwiShishini lePropathi yakho Xa ujongene nepropathi yokuthengisa izindlu, uxakeka ngokujaja amathuba amatsha ngenjongo yokuguqula ibe zizikhokelo ezifanelekileyo kwaye ekugqibeleni kubathengi abathembekileyo. Ngelishwa, ayizizo zonke ezikhokelela ekuvuthweni kubathengi basekhaya. Ngamanye amaxesha, abathengi bakho abakhoyo abanokubuya babuye. Amaxesha amaninzi, abathengi abakhumbuli namagama eearhente zepropathi ababesebenza kuzo ngaphambili. Ngenxa yoko, uyasilela ukunxibelelana nabo. Ke ngoko, inkqubo yeCRM ikunceda ukuba uqhagamshelane nabaxumi bakho kunye […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Agasti 14, 2018 Kutheni uHlalutyo lwe-SWOT lubalulekile kwishishini lokuthengiswa kwezindlu? Indawo yentengiso yokuthengiswa kwezindlu nomhlaba itshintsha ngokungxama. Abantu bakhetha ukutyala imali kwiipropathi okanye kwipropathi yexesha elide. Ngokucwangcisa ngononophelo kwezinto zangaphakathi nangaphandle ezichaphazela i-real estate, umntu unokuthatha ithuba leshishini. Kodwa, ucwangcisa njani ngempumelelo? Ukuphendula umbuzo wakho, uninzi lweenkonzo zeshishini zenza uhlalutyo lwe-SWOT kwishishini lakho lokuthengiswa kwezindlu. Phambi kokuba sincede ukuba basincede njani, sazise ukuba loluphi uhlaziyo lwe-SWOT […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Februwari 4, 2019 Isikhokelo esifutshane: Ukwenza iWebhusayithi yakho yeNdawo isiPhumelele Iindlela ezahlukeneyo zingasetyenziselwa ukuthengisa iwebhusayithi yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba. Eli nqaku libonelela ngolwazi ngeendlela zokuthengisa iwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba. Xa unewebhusayithi, oko akuthethi ukuba uya kubafumana abathengi abangena kwiwebhusayithi yakho beyokufuna iinkonzo zakho. Ngaphandle kokuba newebhusayithi, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyenzile iwebhusayithi ngendlela yokuba iindwendwe ziya kuza zizokuhlala kwisayithi njengoko zikhangela malunga neenkonzo zakho. Ukwenza iiwebhusayithi zee-realtors zifuna […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu